Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato ku-tumashada biyaha | Cusbooneysiinta Cagaaran
Miyaad taqaan cunista biyaha? Waxaa jira dhibaatooyin badan oo deegaanka la xiriira wasakheynta biyaha. Waan qeexnaa wasakheynta biyaha sida luminta astaamaha dabiiciga ah ee biyaha iyo isku dhafka ay sabab u yihiin wakiilo dibadeed, ha noqdaan kuwo dabiici ah ama kuwa macmal ah. Waxaa jira noocyo badan oo wasakh ah oo awood u leh inay wax ka beddelaan, beddelaan oo hoos u dhigaan astaamaha asalka u ah biyaha. Wasakhda biyaha awgeed, waxay lumisaa shaqadii ay ku laheyd nidaamka bey'ada deegaanka mana loo cabbi karo bina aadamka, marka lagu daro sunta.
Noocyada wasakheynta biyaha ee jira maanta waxaan ka hadli doonnaa eutrophication. Eutrophication-ka biyuhu waa geedi socod dabiici ah oo ku jira nidaamka deegaanka, oo ay sameyso kobcinta nafaqooyinka ay soo saaraan waxyaabo dabiici ah oo xad-dhaaf ah Hawlaha aadanaha ayaa lagu sii daayay wabiyada iyo harooyinka. Dhibaatooyin noocee ah ayaa eutrophication-ka biyaha u siidaaya bani-aadamka iyo nidaamka deegaanka dabiiciga ah labadaba?
1 Qeexida tayada biyaha
2 U-baahinta biyaha
3 Cawaaqibta ka dhalan karta eutrophication-ka biyaha
4 Marxaladaha eutrophication-ka biyaha
4.1 Marxaladda Oligotrophic
4.2 Bixinta nafaqada
4.3 Marxaladda Eutrophic
5 Waxyaabaha sababa eutrophication-ka biyaha
5.2 Dhaqashada lo’da
5.3 Qashinka magaalooyinka
5.4 Hawlaha warshadaha
5.5 Wasakhowga hawada
5.6 Hawlaha dhirta
Qeexida tayada biyaha
Si loo bilaabo hadalka ku saabsan eutrophication-ka biyaha (sidaan horey u soo sheegnayba, waa nooc wasakheynta biyaha ah) waa inaan qeexnaa, sida uu qabo sharciga hada jira, waa maxay biyaha ku jira xaalad wanaagsan.
Waxaan u qeexnaa tayada biyaha sida ay u tahay cabiraadaha jirka, kiimikada iyo bayoolojiga ee ay biyahani soo bandhigaan iyo kuwa leh taas oo u oggolaanaysa nolosha noolaha ku dhex nool. Tan awgeed, waa inay lahaataa astaamo dhowr ah:
Ka xoroobo walxaha iyo nooleyaasha khatarta ku ah macaamiisha.
Ka xoroobo walxaha siinaya sifooyin aan fiicnayn isticmaalkeeda (midab, jahwareer, ur, dhadhan).
Si loo ogaado xaaladda ay biyuhu ku jiraan, waa inaan isbarbar dhignaa cabirrada la helay ka dib markii lagu falanqeeyay shaybaarka iyo heerarka tayada biyaha. Heerarkan waxaa soo rogay Dardaaranka 2000/60 / EC ee Baarlamaanka Midowga Yurub iyo Golaha, kaasoo dejinaya qaab-dhismeedka bulshada ee waxqabadka dhinaca siyaasadda biyaha, oo sida fiican loo yaqaan Dardaaranka Qaab-dhismeedka Biyaha. Dardaarankan ayaa looga dan leeyahay in lagu gaadho laguna ilaaliyo xaalada wanaagsan ee deegaanka iyo kiimikada ee biyaha.
200-kii sano ee la soo dhaafey, ninku wuxuu dardar geliyey geeddi socodka shucaaca, isagoo wax ka beddelaya tayada biyaha iyo qaab dhismeedka bulshooyinka bayoolojiga ah ee ku dhex nool.
Eutrophication-ku wuxuu soo saaraa koritaanka ballaaran ee microalgae taas oo dheehda biyaha cagaaran. Midabkani wuxuu keenaa in qoraxda qorraxdu soo gasho lakabyada hoose ee biyaha, sidaa darteed algae ee heerkaas ah ma helaan iftiin ay ku fuliyaan sawir qaade, taas oo keenta dhimashada algae. Dhimashada algae waxay soo saartaa tabaruc dheeri ah oo ah walxaha dabiiciga ah si meesha ay u noqoto mid qurmay iyo jawi yaraanaya (tan macnaheedu waa deegaan ku yar oksijiin).
Cawaaqibta ka dhalan karta eutrophication-ka biyaha
Marka uu jiro eutrophication, biyuhu waxay si weyn u lumiyaan waxtarka u leh ee loogu talagalay iyo sidoo kale waxay keenaysaa geerida noocyada xoolaha, kala daadsanaanta biyaha iyo koritaanka noolaha (inta badan bakteeriyada).
Intaas waxaa sii dheer, marar badan, jeermisyadu waxay khatar ku yihiin caafimaadka dadka, sida ku dhacda jeermiska biyaha ku dhasha.
Eutrophication-ku wuxuu badalaa astaamaha deegaanka ee nidaamka deegaanka beddelka silsiladda cuntada iyo kordhinta entropy (khalkhalka) nidaamka deegaanka. Tani waxay leedahay cawaaqib xumo sida luminta kala duwanaanta kala duwanaanta nidaamka deegaanka, isu dheelitir la'aanta bey'adda, maadaama noocyo yar oo is dhexgala ay isdhaafsanayaan, hantida iyo kala duwanaanshaha hidaha ayaa yaraanaya.
Mar haddii aaggu lumiyo awooddiisa ama kala duwanaansha dhul ahaaneed, noocyada fursadaha badan ayaa badanaya, iyagoo qabsanaya niches-ka ay hore u dhiseen noocyada kale. Cawaaqibka deegaanka ee eutrophication-ka biyaha waxaa weheliya cawaaqib dhaqaale. Luminta biyaha la cabo iyo xaalada wanaagsan ee wabiyada iyo harooyinka ayaa keena khasaaro dhaqaale.
Marxaladaha eutrophication-ka biyaha
Eutrophication-ka biyuhu si dhakhso leh uma dhacaan, laakiin wuxuu leeyahay dhowr marxaladood sida aan hoos ku arki doonno:
Tani caadi ahaan waa xaalad caadi ah oo caafimaad qabta nidaamyada deegaanka. Nidaamka deegaanka ee webiga, tusaale ahaan, celcelis ahaan jiritaanka nafaqooyin ku filan si loo ilaaliyo noocyada xoolaha iyo dhirta ku dhex nool iyo heerka shucaaca ku filan si algae ay ugu dhex sawiraan.
Marxaladda oligotrophic biyuhu waxay leeyihiin hufnaan iyo dhexdeeda waxaa jira xayawaan neefsada oo shaandheeya oksijiinta.
Bixinta nafaqada aan caadiga ahayn waxay noqon kartaa mid goos goos ah, shil ama waxay noqon kartaa wax si isdaba joog ah u socda. Haddii waqti ka waqti ay jiraan daadad keena nafaqooyin saa'id ah oo ku jira webiyada, nidaamka deegaanka ayaa soo kaban kara. Si kastaba ha noqotee, haddii bixinta dheeraadka ah ee nafaqadu ay bilaabato inay joogto noqoto, koritaanka qarxa ee dhirta iyo algae ayaa bilaabmi doona.
Waxaa jira algae unicellular ah oo ku kora biyaha, aagga sawirka ee isla. Maaddaama ay yihiin algae sawir-qaade ah, waxay biyaha siinayaan midab cagaar ah oo ka hortagga marinka iftiinka moolka ee uu horay u gaadhay. Tani waxay dhibaato ku abuureysaa dhirta ku taal aagga aagga sawirka, tan iyo, ma helayo qorrax ku filan, sawirro iskama dhigi karaan oo ma dhiman karaan.
Intaas waxaa sii dheer, nafaqooyinka xad dhaafka ah awgeed, dadka dhirta iyo algae waxay marayaan koboc aad u sarreeya iyo, sida dhammaan nidaamyada deegaanka dabiiciga ah, isu-dheellitirka bey'adda ayaa jabay. Hadda xaaladdu waxay u egtahay sidan: nafaqooyin badan oo dad badan. Si kastaba ha noqotee, xaaladdan ma sii socon karto muddo dheer, badanaa sababta oo ah dadku waxay naaqus ka dhigayaan nafaqooyinka waxayna u dhammaanayaan inay dhintaan oo ay ku laabtaan gunta wabiga ama harada.
Maaddada dabiiciga ah ee dhimatay ee gunta ku jirta waxaa baabi’iyay bakteeriya cunta oksijiinka sidoo kale waxay soo saari kartaa suno u dhinta dhirta iyo xayawaanka.
Maqnaanshaha oksijiinku wuxuu sababayaa in jajabku xagga hoose u dhinto kalluunka iyo qoloftana ay u dhintaan ama u baxsadaan aagagga aan saamaynta ku yeelan Noocyada duulaanka ah ee caadeystay yaraanta oksijiinta ayaa laga yaabaa inay muuqdaan (tusaale ahaan, barbels iyo kalgacal ayaa barakicin kara kalluunka salmon iyo kalluunka).
Haddii eutrophication-ku aad u dhawaaqo, aag aan oksijiin lahayn ayaa laga abuuri karaa salka wabiga ama harada taas oo biyuhu aad u cufan yihiin, mugdi yihiin oo qabow yihiin oo aan u oggolaanayn koritaanka algae ama xayawaanka.
Waxyaabaha sababa eutrophication-ka biyaha
Eutrophication of water waxay ku dhici kartaa siyaabo kala duwan, dabiici iyo bini aadam labadaba. Ku dhowaad dhammaan kiisaska eutrophication ee biyaha adduunka oo dhan waxaa sababa waxqabadyada aadanaha. Kuwani waa sababaha ugu waaweyn:
Beeraha waxaa loo isticmaalaa Bacriminta nitrogen si ay u bacrimiso dalagyada. Bacrimiyeyaashan ayaa dhex mushaaxa dhulka waxayna gaaraan wabiyada iyo biyaha dhulka hoostiisa mara, taas oo keeneysa nafaqeyn dheeri ah oo ay keento biyaha ayna kiciso cuncun.
Nooca eutrophication-ka ee ay soo saaraan beeraha ayaa ah mid gabi ahaanba faafan, maaddaama uruurintu ay ku baahsan tahay meelo badan oo dhammaantood aysan isku mid ahayn.
Dhirta xayawaanku waxay hodan ku yihiin nafaqooyinka, gaar ahaan nitrogen (ammonia) ee dhirtu u adeegsato inay ku baxdo. Haddii saxarada xoolaha aan si wanaagsan loo maamulin, waxay ku dambayn karaan wasakheynta biyaha u dhow.
Caadi ahaan soosaarka ama wasakheynta biyaha agagaarka xoolaha ku dhacdo waqti ku habboon oo gebi ahaanba kama baaraandegaan biyaha.
Qashinka magaalooyinka ee inta badan sababi kara in biyaha la cuno ayaa ah wasakhda fosfateerka. Fosfoorku waa mid kale oo ka mid ah nafaqooyinka lagama maarmaanka u ah dhirta, markaa haddii aan biyo ku darno tiro badan oo fosfooraska ah, dhirta ayaa si xad-dhaaf ah u tarmi doonta waxayna sababi doontaa cuno-baxa.
Waxqabadka warshadaha ayaa sidoo kale noqon kara isha nafaqooyinka awood u leh soo saar ilaha gaarka ah ee eutrophication. Marka laga hadlayo warshadaha, labadaba nitrogenous iyo phosphate wax soo saar ayaa la soo saari karaa, iyo suno kale oo badan.
Sida eutrophication-ka ay sababaan qashinka magaalooyinka, waa mid si muuqata loo ilaaliyo, oo saameysa aagag gaar ah oo leh xoog weyn markii ay dhacdo.
Dhammaan qiiqa gaaska lagu sii daayo maahan kuwo awood u leh inay biyaha ku shubaan eutrophication Si kastaba ha noqotee, qiiqa ka soo baxa oksaydhka oksaydhka iyo baaruudda ee jawiga ku falceliya soona saara roob aashito leh.
30% ee nitrogen-ka gaadha badaha wuxuu ku maraa marinka hawada.
Haddii haraaga kaynta ay ku hartay biyaha, markii la xaalufiyo waxay ku darsadaan dhammaan nitrogen-ka iyo inta kale ee nafaqooyinka ee dhirtu lahayd. Mar labaad waa sahay dheeri ah oo nafaqooyin ah oo sameeya eutrophication.
Eutrophication of water waa dhibaato caalami ah oo saameysa dhamaan ilaha biyaha macaan. Waa dhibaato ay tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo xaliyo, maadaama isbedelka cimilada ay abaaruhu sii kordhayaan waana inaan ilaalinaa dhamaan kheyraadka biyaha macaan ee ka jira meeraha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Eutrophication-ka